Miverina, miverimberina ny tantara… | NewsMada
Miverina, miverimberina ny tantara…
Mandeha ny andro, mihazakazaka ny fotoana. Hivalona sahady ny telo volana voalohany amin’ity taona 2016 ity. Hanao ahoana indray re ity telo volana faharoa, hanomboka rahampitso ity e ? Milamindamin-dratsy, tsy hita hoe ahoana. Miverina ambony latabatra ary mety hafampana indray izao ny adihevitra amin’ny hoe fihetsiketsehana na famoriam-bahoaka… an-dalambe. Indrindra taorian’ireny zava-nitranga teny Andrainarivo, ny andron’ny 29 marsa teo, ireny.
Any amin’ny ankamaroan’ny tany, mitonona ho demokratika, manome alalana ny fihetsiketsehana sy ny fahalalahana maneho hevitra ny lalàna. Malaza amin’izany, ohatra, ny Amerikanina, araka izay voalaza ao amin’ny fanitsiana voalohan’ny lalàmpanorenana amerikanina. Heverina ho toy ny zo mihitsy aza izany. Amin’ny ankapobeny, ny famoriam-bahoaka, indrindra ny fihetsiketsehana an-dalambe, izay mety hanakorontana na hanohintohina ny filaminam-bahoaka, indrindra raha tsy nahazoana alalana, dia azon’ny mpitandro filaminana ravaina, aorian’ny fanomezana na fandefasana fampitandremana. Tsy dia matetika anefa izany fampiasan-kery izany, toy ny any Frantsa.
Eto amintsika, efa an-taona maro, indrindra nanomboka tamin’ny Repoblika fahatelo, no efa voarara hatrany ny fanaovana fihetsiketsehana na famoriam-baohoaka an-dalambe. Heverin’ny fitondrana ho manohintohina ny filaminam-bahoaka hatrany ny fanaovana fihetsiketsehana na famoriam-bahoaka an-dalambe. Eo ihany ny hoe ”manohintohina ny filaminam-bahoaka”, fa ny tena marina, manakorontana na manohintohina ny seza na ny tombontsoan’ny mpitondra izany. Hany ka ireny iaraha-mahita ireny hatrany ny zava-mitranga; gidragidra, sakoroka, baomba lakrimozenina…
Ahiana hiverina indray izany, raha ny fandehan’ny toe-draharaha samihafa eto amin’ny firenena. Indrindra eo amin’ny lafiny politika, ao anatin’ity telovolana faharoa ity. Ny nandrava, mbola ho voarava; ny nandrodana, mbola harodana… Hatreto aloha, marina tokoa ny voalazan’ny mpandinika fa ”miverimberina ny tantara”.